चितुवा मारेर सुकुटी बनाउने ४ जना पक्राउ - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
चितुवा मारेर सुकुटी बनाउने ४ जना पक्राउ
Published On : २६ बैशाख २०७५, बुधबार १६:३०
बाघ, चितुवाजस्ता जंगली जनावार देख्दा नडराउने कमै हाेलान्।
हिंस्रक यस्ता जंगली जनावरले मान्छेलाई आक्रमण गरेका खबर बेलबखत आइरहन्छन्। तर सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा एउटा अनौठो घटना भएको छ।
त्यहाँ मान्छेले चितुवा मारेर मासुका लागि उपयोग गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। चितुवा मारेर मासुको सुकुटी बनाउने कार्यमा संलग्न चार व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इन्द्रावती गाउँपालिका पीपलटार घर भएका लक्ष्मण दनुवार, शविन दनुवार, नारायण दनुवार र ज्ञानबहादुर दनुवार पक्राउ परेका छन्।
उनीहरुले हिजो मंगलबार घर नजिकैको जंगलबाट चितुवा समातेका थिए। चितुवा घर ल्याई मारेर मासु काटेर झुन्ड्याइसकेको अवस्थामा भीमटार प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरीले बुधबार उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनीहरुले ताजा मासु खानका लागि उपयोग गरेका थिए। तत्काल खान नसकिने मासु सुकुटी बनाउने प्रक्रिया पूरा गरेकाे अवस्थामा प्रहरी पुगेकाे थियाे।
सग्लै निकालिएकाे चितुवाको छाला प्रहरीले बरामद गरेकाे छ।
प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको जिम्मा लगाएको छ। वन कार्यालयमा उनीहरुको बयान भइरहेको छ।